Meesha saxda ah waqtiga saxda ah, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Kulan ku saabsan helitaanka macaamiisha oo ka dhacay mid ka mid ah dukaankeenna, qof shaqaale ah ayaa ila wadaagtay istiraatiijiyadeeda: "Waa inaad joogtaa meesha saxda ah waqtiga saxda ah". Waxaan is tusay inay tani dhab ahaan noqon doonto istiraatiijiyad wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, way fududahay in la yiraahdo intii la qabtay. Waxaan imid meeshii saxda ahayd waqtigii saxda ahaa dhowr jeer - tusaale ahaan, markaan socod ku marayay xeebta Australia waxaanan la kulmay koox dad ah oo aragtay nibiriyada badda. Kaliya maalmo kahor waxaan arkay shimbir dhif ah, Hans oo qoslaya. Miyaadan jeclaan lahayn inaad joogto goobta saxda ah waqtiga saxda ah? Mararka qaarkood waxay u dhacdaa si shil ah, marar kalena waxay jawaab u tahay salaadda. Waa wax aanaan qorsheyn karin ama xakamayn karin.
Markaan joogno meesha saxda ah waqtiga saxda ah, dadka qaarkiis waxay u nisbeeyaan xiddigta xiddigta kuwa kalena waxay si fudud ugu yeeraan nasiib. Rumaystayaashu waxay jecelyihiin inay ugu yeeraan xaaladdan oo kale "faragelinta Ilaah ee nolosheena" maxaa yeelay waxay rumaysan yihiin in Ilaah uu ku lug lahaa xaaladda. Farogelinta Eebbe waxay noqon kartaa xaalad kasta oo ka dhigeysa mid u muuqata in Eebbe dadka ama duruufaha isugu keenay wanaag. "Waxaannu og nahay, in wax waliba ay ugu adeegaan kuwa Ilaah jecel, kuwa loogu yeedhay sida taladiisu tahay" (Rooma 8,28). Aayaddan oo aad loo yaqaan oo mararka qaar si khaldan loo fahmo macnaheedu maahan in wax kasta oo ku dhaca nolosheenna ay tahay mid hoggaamisa oo Ilaah xukuma. Si kastaba ha noqotee, wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaan raadino sida ugu fiican xitaa waqtiyada adag iyo xaaladaha xun.
Markuu Ciise ku dhintay iskutallaabta dusheeda, xertiisii ​​waxay sidoo kale la yaabeen sida khibraddan argagaxa leh ay u soo saari doonto wax wanaagsan. Qaar xertiisii ​​ka mid ah ayaa ku soo noqday noloshoodii hore oo waxay u shaqeeyeen sidii kalluumeysato maxaa yeelay waxay is casileen markii ay gaareen go'aan ah in dhimashadii iskutallaabta lagu qodbay ay ka dhigan tahay dhammaadka Ciise iyo hawshiisa. Intii lagu jiray saddexdaas maalmood inta u dhaxeysa dhimashada iskutallaabta iyo sarakicidda, rajada oo dhan waxay umuuqdeen kuwo lumay. Laakiin sida xertii markii dambe bartay iyo sida aan ognahay maanta, waxba kuma lumin iskutallaabta, laakiin wax walba waa lagu guuleystay. Ciise, dhimashada iskutallaabta ma ahayn dhamaadka, laakiin waa bilowga. Ilaah dabcan bilowgiisa wuu qorsheeyey in wax wanaagsan ay ka soo baxaan xaaladdan muuqata oo aan macquul ahayn. Waxay ahayd wax ka badan lama filaan ama faragelinta Ilaah, waxay ahayd qorshaha Ilaah bilowgii. Taariikhda aadanaha oo dhami waxay horseedeen heerkan loo jeedinayo. Waa qodobka udub dhexaadka u ah qorshaha weyn ee Ilaah ee jacaylka iyo madax furashada.
Ciise wuxuu ku sugnaa meesha saxda ahayd waqtiga saxda ahaa sidaa darteedna marwalba waxaan ku saxnaa halka aan joogno. Waxaan runtii nahay meesha Ilaah doonayo in aan joogno. Isaga oo isaga ku dhex galana, si ammaan ah ayaannu ugu dhex jirnaa Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Jeclaaday oo laga soo furtay isla awoodda uu Ciise kuwii dhintay ka soo sara kiciyey. Ma aha inaan ka walwalsanaano inay nolosheena qiimo u leedahay waxna isbadal ku samayso dhulka. Si kasta oo ay rajo xumo u yihiin duruufaha nololeed ee nagu hareeraysan, waxaynu hubin karnaa inay wax waliba isku habboonaan doonaan, maxaa yeelay Ilaahay wuu na jecel yahay.
Sida dumarka iyo xertii si bayaan ah rajo beelka uugu dhiibeen sedexdaan maalmood ee mugdiga ah, waxaan mararka qaar u qulqulinaa rajo la’aan nolosheena ama nolosha dadka kale maxaa yeelay rajo kama muuqato inay muuqato. Laakiin Ilaahay wuu qallajin doonaa ilmo kasta oo jeexan oo wuxuu ina siinayaa dhammaadka wanaagsan ee aan rajeyneyno. Waxaas oo dhami waxay dhacaan oo keliya maxaa yeelay Ciise wuxuu ku sugnaa meesha saxda ahayd wakhtigii ku habboonaa.